Sida loo soo celiya Lugood Library ka iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4
Sida loo soo celiya Lugood Playlists
> Resource > Lugood > Sidee soo celinta Lugood Playlists
"Inkasta oo cusboonaysiinta playlists Lugood, waxaan ka Lugood Library si qalad ah la tirtiro playlist ah. Suroobi karaa waddo fudud in la soo celiyo playlists Lugood? Waxaan xitaa isku dayay in uu badalo Lugood Library.xml jir ah ama ka weyn ah mid ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, weli ka maqnaan playlist tirtiray"
Iyada oo la xariirta playlists in Lugood, aad tirtirto laga yaabaa in playlists Lugood kac ahayn. Xaaladdan oo kale, si loo soo celiyo playlists Lugood, doorashada mar waa in la bedelo Lugood Library.itl la file ah oo ka weyn. Si kastaba ha ahaatee, inta badan, haddii aadan la casriyeeyay Lugood aad muddo dheer, ka dibna waxa ay u badan tahay in ay playlist Lugood tirtiray aan ka jirin Lugood Library.itl oo dhan. Halkii ay ka soo celinta playlists Lugood si guul leh, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale waayi Lugood Library hadda. Waxaan arki daraasiin noocan oo kale ah posts ee forums. Dhab ahaantii, waxaad soo celin karaa Lugood playlists ka iPhone, iPod, ama iPad la TunesGo Wondershare .
Download TunesGo version maxkamad bilaash ah!
Wondershare TunesGo kuu ogolaanayaa inaad si loo soo celiyo playlists Lugood by wareejinta, kuwaas oo playlists ka iPhone, iPod, iyo iPad haddii aad synced playlists Lugood ka hor la tirtiro. Info soo socda uu kuu sheegayaa sida loo soo celin Lugood playlist ka qalabka macruufka.
Tallaabada 1. Connect macruufka qalabka kombiyuutarka
Download iyo rakibi TunesGo on your computer. Connect qalab macruufka taas oo ka kooban playlist aad u baahan tahay la PC iyo TunesGo la bilaabay. TunesGo ogaan doonaa qalab macruufka ah (iPhone, iPod, iPad) oo ay muujiyaan in uusan xirmin suuqa ugu weyn ee la info ee aasaasiga ah. TunesGo hadda si buuxda u taageersan iPhone 5, iPad mini, iPod taabto, iwm Baro dheeraad ah oo ku saabsan qalabka taageeray.
Tallaabada 2. ka qalab macruufka Soo Celinta Lugood playlist
In bidix ee suuqa ugu weyn, waxa aad ka arki kartaa "Playlists" item. Just guji Playlists u muujiyo oo dhan playlists in this category. Raadi dooro mid ka mid ah aad u baahan tahay. Riix saddexagalka hoos "Dhoofinta in" iyo dooran "Dhoofinta in Lugood Library". Oo uldhexaadda horumar ah oo ka soo muuqan doona, sida ay soo bandhigeen horumarka socda.
Tani soo celinta playlists Lugood ugu dhakhsaha badan waxaa dhammaan doona. Ka dibna waxaad u tagi kartaa Lugood ay u fiiriyaan playlist Lugood ah. By default, rating iyo play tirada waxa loo wareejiyay Lugood iyo sidoo. Eeg, sida ay u fududahay in loo soo celiyo playlists Lugood ka qalabka macruufka. Sidaas dib markii aad la tirtiro Lugood playlist (s) si lama filaan ah, ma u hagaagsan Lugood leh qalab macruufka isla markiiba. Just isticmaali TunesGo si ay u soo celiyaan.
Ka External Hard Drive Bedelka Music inay Lugood